35KV simba transformer
Amorphous chiwanikwa transformer
Box mhando transformer
Dry mhando transformer
S13-mrl Triangle makirisito transformer
Welcome To gat
Jiangsu Tianhua transformer Co. Ltd. Munhu yepamusorosoro zvebhizimisi specialized pakuburitswa, kukura uye rokutengesa ose transformers uye anoenderana zvigadzirwa. Company iri yechipiri pakukura guta riri Jiangsu mudunhu, National nzwisisika zvokufambisa nomusimboti, kumabvazuva China inokosha sainzi uye dzidzo, tsika nemagariro, mari, tourism, zvoutano, gungano uye kuratidzwa pakati, zvinokosha zveupfumi, yezvokutengeserana uye Trade Center Jiangsu mudunhu, Xuzhou guta, iro Beijing-Shanghai njanji uye Longhai njanji ari mharadzano ichi, kuti Eurasian Continental zambuko traverses pamusoro Xuzhou, kutakurwa zvikuru nyore.
The zvachose mubhizimisi wekambani iri mamiriyoni 258 Yuan, pamwe vakanyoresa guta guru mamiriyoni 55 Yuan. The kambani ine 270 vashandi, kusanganisira 7 mukuru engineers.More pane 110 mukuru hwokugadzira vashandi akadai chiremba uye tenzi degree.Since boka rakanga nheyo, vakaraira kutevera ISO9000 yepamusoro Kwevadzidzi uye kupa vatengi pamwe yokuisvonaka mishonga kuti asangane zvinoitwa nomumwe nharaunda.
We pamwe mutengi hwedu michina yemhando yepamusoro, midziyo vomuzana kirasi, yokuisvonaka, basa dzinogutsa uye mukurumbira wakanaka, tsvakai nevakawanda kukura, kugamuchira pachokwadi vanhu vanobva mumamiriro ezvinhu ose oupenyu kuuya kambani yangu kukurukura pamwe, asike penya!
Vatengi: kupa vatengi vane zvinhu nemazvo uye mabasa yepamusoro kunonyanyisa ukoshi kuhwina vatengi 'kunzwisisa, kuremekedza uye kutsigirwa nokutendeseka uye simba.
Vashandi: chivimbo vashandi 'kuita uye kuzvitsaurira, bvuma vashandi vavo' kuita uye anopa tsamba anodzoka, nokusika kushanda ezvinhu akanaka uye kukura tarisiro vashandi vavo.
Market: kuderedza zvokuvakisa mari uye ngozi vatengi, uye zvinopa zvinovimbisa chaicho vatengi inivhesitimendi.
Development: vatevere inogona kuenderera mberi zvinangwa uye kuvaka pamusoro vatengi kugutsikana.
Enterprise mweya: nechivimbo, kuzviranga, yekuzviriritira uye kuzvidzora kuvandudzika.
Kubvira pakagadzwa, fekitari yedu yave dzichiri kutanga kirasi nyika zvigadzirwa pamwe nokuomerera nheyo
yakanaka yokutanga. Zvigadzirwa edu vakawana mukurumbira wakanaka mune bhizimisi uye valuabletrusty pakati vatengi zvitsva nezvitsaru ..
Power Distribution Transformer 1000kva, Transformers Manufacturer, 11kv Oil kunyudzwa Power transformer , transformer 5000kva, Oil transformer, 1000 Kva Transformer With Price,